यौन/स्वास्थ्य Archives - Page 22 of 25 - Saptakoshionline
शरीर विज्ञान सम्बन्धी समुन्द्र शास्त्रका अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिको स्वभाव र चरित्र ब्यक्तिको दाँत हेरेर अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँ समुन्द्र शास्त्रका अनुसार कस्तो दाँत भएका स्त्री वा पुरुषको स्वभाव र चरित्र कस्तो हुन्छ? -जुन स्त्रीको दाँत केही बाहिर नस्किएका हुन्छन् त्यस्ता स्त्री बढी बोलने र आफ्नो कुरा अरुलाई मनाउन सक्छन् । यसै कारण यस्ता महिला परिवारमा प्रिय पात्र बन्न सक्दैनन् । यस्ता दाँत हु...
हाँस्नुका फाइदा यस्ता
हाँस्नु स्वास्थयको लागि लाभदायी हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । तर यसका फाइदा के–के हुन् भन्ने सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । हाँस्नुका फाइदा यस्ता छन् : १. यदी हामी एक घन्टा हाँस्योै भने हाम्रो शरिरबाट चार सय क्यालोरी खर्च हुन्छ, जसले वजन नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । २. तनाब नियन्त्रण हुन्छ । धित मर्नेगरी हास्दा शरिरको स्ट्रेस हर्मन न्यून हुने र स्वभाविक रुपमा मनमा खुसी हुने रसायन उत्पन्न हुन्छ । ३...
इटहरी । झापाको विर्तामोडमा सञ्चालनमा रहेको बी एण्ड सी टिचिगं अस्पतालले चिकित्सा विज्ञानका क्षेत्रमा स्वास्थ्य जाँचका लागि प्रयोगमा ल्याईएको अत्याधुनिक प्रविधिको चिकित्सा स्वास्थ्य जाँच केन्द्रको इटहरीमा उद्घाटन गरिएको छ । बी एण्ड सी डायग्नोष्टिकको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभाका साँसद एवम पूर्व राज्यमन्त्री सिताराम मेहताले इटहरी जस्तो ठूलो शहरमा बिर्तामोडमा सफल बी एण्ड सी टिचिगं अस्पतालले सय शैयाको ...